Wararka Suuqa Arsenal: Todoba Ciyaartoy Oo Ay Suurtogal Tahay In Ay Arsenal La Soo Wareegto Iyo Shanta Xidig Oo Ku Jira Nadiifinta Unai Emery Ee Gunners. - Gool24.Net
Wararka Suuqa Arsenal: Todoba Ciyaartoy Oo Ay Suurtogal Tahay In Ay Arsenal La Soo Wareegto Iyo Shanta Xidig Oo Ku Jira Nadiifinta Unai Emery Ee Gunners.
June 3, 2019 Mahamoud Batalaale
Tababaraha kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa todobaadkan kulan la qaadanaya boodhka kooxdiisa si ay uga wada xaajoodaan qorshaha suuqa kala iibsiga ee xagaagan.
Waxaa la filayaa in kulanka Emery iyo boodhka kooxdiisa Gunners lagu qorshayn doono liiska ciyaartoyda ay tahay in ay kooxdu la soo saxiixato iyo taas badalkeeda kuwa kooxda laga fasixi doono.
Waxaa jira ilaa todoba ciyaartoy oo ay Arsenal lala xidhiidhinayo kuwaas oo ay surtogal tahay in ay qaar ka mid ah la soo saxiixan karto halka ay jiraan shan ciyaartoy oo ay kooxdu iibin karto.
Arsenal waxay haddaba hore ugu dhawaaqday in ay kooxdeeda ka baxayaan Aaron Ramsey iyo Danny Welbeck kuwaas oo si rasmi ah xor u noqon doona marka la soo gaadho June 30.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gubbinaysa liiska ciyaartoyda Arsenal lala xidhiidhinayo iyo waliba kuwa ay suurtogalka tahay in ay bixi doonaan ee shirka Emery iyo boodhka kooxd looga hadli karo.
Shanta Xidig Ee Ala Filayo In Ay Maamulka Gunners Meesha ka Saari Doonaan:
Unai Emery ayaa soo qaata in ku filan oo uu ku fahmi karo Henrikh Mkhitaryan iyo Shkodran Mustafi kuwaas oo ka mid noqonaya dhibanayaasha nadiifinta macalinka reer Spain ee Emirates Stadium.
Shkodran Mustafi ayaa gabi ahaanba lumiyay taageeradii jamaahiirta kooxdiisa kuwaas oo si adag u naqdiyay xaalada xun ee uu kooxdooda soo baday xili ciyaareedkan halka Mkhitaryan uu ka mid noqon karo ciyaartoyda ay Gunners lacagta ka samayn karto.
Laurent Koscielny oo heshiiskiisa Arsenal uu hal sano ka hadhay ayuu wargayska The Sun sheegay in ay Gunners xagaagan iibin karto taas oo isbadalka Gunners sii balaadhin karta.
Xidiga afraad ee ay Arsenal doonayso in ay xagaagan meesha ka saarto ayaa ah Mesut Ozil inkasta oo wakiilkiisu ku dooday in Ozil uu dhamaysan doono labada sanadood ee ka hadhsan qandaraaskiisa Arsenal.
Unai Emery oo qaabab kala duwan xili ciyaareedkan ula soo dhaqmay Mesut Ozil ayaa la filayaa in uu kulanka boodhka kooxdiisa kaga hadli doono in Ozil la iibiyo.
Xidiga shanaad ee uu mustaqbalkiisa Arsenal cirka ku shareeran yahay ayaa ah Stephan Lichtsteiner kaas oo sanadkii hore uu Emery la soo wareegay laakiin inkasta oo Stephan Lichtsteiner uu wada xaajood la yeeshay kooxdiisa Gunners haddana waxaa lagu tirinayaa ciyaartoyda bixi kara.
Riix 2 si aad u akhrisato todobada ciyaartoy ee Arsenal lala xidhiidhinayo.